I-Ex-World Athletics Champion uNicholas Bett uyafa | TeraNews.net
Iintshatsheli zeMbaleki yeHlabathi yeBhola ekhatywayo uNicholas Bett uyafa
umbhali ubugcisa Papashwe ngomhla 08.08.2018
Iingozi zeemoto zibulala ubomi babantu abaninzi mihla le. Kwaye ubuntu bukhumbula ingxaki kuphela kwiimeko apho kufa abantu abadumileyo. Khumbula, ubuncinci iViktor Tsoi - imvumi yeliwa intandokazi phakathi kolutsha lwe90's. Okanye nguPrincess Diana, osweleke eParis, kwingozi yemoto. Iinkwenkwezi zePop, abadlali beefilimu, iimbaleki kunye nabapolitiki-basweleke ezindleleni kungekho namnye. Ke, kwi-7 ka-Agasti 2018 yonyaka, imbaleki eyimbali uNicholas Bett usweleke.
Intshatsheli yehlabathi ekubhubheni isweleke isencinci-iminyaka ye-28. Ngokwenkonzo yeendaba IAAF, ingozi yenzekile kumantla ntshona eKenya, eNadi.
Inguqulelo esemthethweni- andikhange ndiyilawule imoto.
Amajelo eendaba aqaphele ukuba owayeyintshatsheli yehlabathi kwiimbaleki uNicholas Bett, ebuyile kukhuphiswano olulandelayo e-Afrika, wafika emva kwevili lemoto. Imozulu enkungu kunye nomkhondo omanzi unokudala imeko kaxakeka. Imoto ibaleke yangena emhadini.
UNicholas Bett wafumana udumo lwehlabathi eBeijing, apho kwi2015 wafumana imbasa yegolide. Kumgama we-400 yeemitha, umKenya ubeke irekhodi. Kuyaphawuleka ukuba iimbaleki ezineminyaka eyi-28 zaba yintshatsheli yokuqala kwimbali yaseKenya kumgama ongaphantsi kwe-800 yeemitha.
I-Honor Band 6 sisacholo somzimba ofuna ukusithenga
I-Casio G-Shock GSW-H1000-1 -Iwotshi ebukeleyo
I-Huawei Bukela i-Fit Elegant-inyathelo lokuqala kwiklasi yeshishini
I-Huawei Bukela i-3 kunye ne-Watch GT 3 ithembisa ii-smartwatches ezinkulu
Ngaba i-OnePlus Band ikhuphisana nayo kwiXiaomi Mi Band 5?
Velomobile Twike 5 - ukukhawulezisa ukuya kuma-200 km ngeyure
Isikuta sombane Xiaomi Mi Mijia Isikuta sombane
Windows 10 Yakha i-2021 okanye inkqubo entsha yokusebenza
Sharp Aquos R6 ifowuni yefowuni kunye neLeica optics
I-Norton 360 ye-antivirus ifunde eyam i-Ethereum
Uhlaziyo lweMkhangeli weMozilla Firefox olungaphumeleli
I-Hadron Collider enkulu ilungele uphando
Ukuhlanganiswa kweNtloko kwenyanga - Amanyathelo okuqala eAmazon
I-GAZ-51, ekhawulezayo ukuya kwi-205 km / h